20 hadiyadaha sanadka cusub ee boorsada kasta
Bogga horeBarnaamijyo waxbarasho Fasax
Dooro qaar asal ah oo qosol leh. Qof kastaa wuxuu iibsan doonaa flash drive caadi ah oo midab madow ah oo suubban naftiisa. Laakin fiishka superhero waa madadaalo in lagu helo hadiyad ahaan.
Maxaa la iibsanayaa
Flash Drive oo ah qaab galoofyada Iron Man ee AliExpress, laga bilaabo 579 rubles →
Flash Drive qaab qalfoof ka AliExpress, laga bilaabo 215 rubles →
Flash Drive oo ah qaab droid R2D2 leh AliExpress, laga bilaabo 276 rubles →
Flash Drive oo leh koodhka Kryptex ee AliExpress, laga bilaabo 2 611 rubles →
2. Gacan-gashi ama gacmo-gashi
Hadiyad raaxo leh oo faa'iido leh. Hubaal qaataha ayaa xidhan doona ugu yaraan hal mar. Oo haddii aad doorato moodal aad ku isticmaali karto taleefanka casriga ah, hubaal waxaad maqli doontaa erayo mahadnaq ah.
galoofyada tolan ee muraayadaha taabashada ee AliExpress, laga bilaabo 124 rubles →
Dharka-dhogorta leh ee dhogorta leh ee Ziener, 1 999 rubles →
galoofyada leh dhagaxyada rhinestones ee Fabretti, 1,030 rubles →
galoofyada ka samaysan maqaar dhab ah oo leh dhogorta Fabretti, 1 649 rubles →
Dharka dhogorta leh ee timaha leh ee Ferz, 1 299 rubles →
Hadiyad kale oo waxtar leh shaki la'aan. Dabcan, waxaad u baahan tahay inaad siiso wax aad u qurux badan iyo sanadka cusub.
Sharaadaha leh wejiyada deerada ee AliExpress, laga bilaabo 90 rubles →
Sharaadaha leh barafka ka yimid Calzedonia, 600 rubles →
Saddex lammaane oo sharabaadyo leh sawirada sanadka cusub ee Jack & Jones, 1 199 rubles →
Sharaadaha sannadka cusub ee carruurta oo leh suulasha AliExpress, 139 rubles →
4. Alaabada ay ku ciyaarto diiqada
Ku wareeji rabitaanka neerfaha xooggan sanadka soo socda.
Xulashada badan ee alaabta lagu ciyaaro ka hortagga walaaca Ka soo qaado AliExpress, laga bilaabo 177 rubles →
Tuubooyinka pop-ga ee 10-tubo ee laga soo bilaabo VLA, 999 rubles →
Ciyaartoyga Penguin ee ka hortagga diiqada oo maro leh, 630 rubles →
5. Sawirro leh caws halkii timo
Qurxinta wanaagsan ee miiska xafiiska ama daaqadaha guriga. Intaa waxaa dheer, daryeelka dhirta waxay keenaysaa niyadda wanaagsan.
Nin timo caws leh, 209 rubles →
Cawska yar ee qaabka gabar-emoticon ka Ecolybchik, 146 rubles →
Herb Tiger oo ka yimid Beerta Auriki, 506 rubles →
Cawska Dabagaale ee Beerta Auriki, 290 rubles →
Waxaad dhaqan ahaan ugu deeqi kartaa jilayaasha Star Wars (haa, waxaan hubnaa in qof walba uu jecel yahay filimadan). Ama fadlan qaataha leh Plants vs. Zombies
Dhirta vs. Dhirta laga bilaabo AliExpress, laga bilaabo 653 rubles →
Sawirka Scorpion ee ka yimid Mortal Kombat ee Quantum Mechanix, 1 944 rubles →
Sawirka Harry Potter ee Funko, 1 399 rubles →
Figurine The Witcher 3 Wild Hunt: Geralt Manticore, 4,999 rubles →
U istaag qalabyada qaabka Boba Fett Star Wars Exquisite Gaming Cable Guy, 1,599 rubles →
7. Kiisaska casriga ah
Dabcan, mawduuca sanadka cusub. Waxa ugu muhiimsan waa in la xasuusto mid ka mid ah saaxiibbadaa uu leeyahay casriga casriga ah, oo aan lagu khaldin cabbirka kiiska.
Daboolida sanadka cusub ee moodooyinka laga bilaabo iPhone 5 ilaa iPhone 13 Pro Max oo leh AliExpress, 138 rubles →
Kiisaska sannadka cusub ee orso iyo deerada ee moodooyinka laga bilaabo iPhone 5 ilaa iPhone 13 Pro Max oo leh AliExpress, laga bilaabo 198 rubles →
Daboolida sanadka cusub ee aaladaha Xiaomi c AliExpress, laga bilaabo 121 rubles →
Daboolista sannadka cusub ee taleefannada casriga ah ee Samsung ee AliExpress, laga bilaabo 108 rubles →
8. Qaadada kafeega
Qaado wax lagu cabbiro oo wax ku ool ah oo sidoo kale loo isticmaali karo sida biibiile loogu talagalay bacda, hadiyad qumman oo loogu talagalay kafeega jecel. Ku xidh qaanso dusheeda si aad u abuurto niyadda ciida
Qaado qaxwo bir ah oo leh clip ka AliExpress, 120 rubles →
Qaadada kafeega leh heerkulka M-Simvol, 329 rubles →
9. Gogol dahab ah
Dahabka dumarku maaha inay qaali noqdaan. Beddelka, waxaad siin kartaa saaxiibkaa laalaad qurxoon ama hilqado qurxoon oo qurux badan.
Qalabka dhegaha iyo dhegaha ee AliExpress, 149 rubles →
Dhegaha qaabka nalalka ka soo Alaska, 416 rubles →
Gacanka xiddigta leh ee Glow Me Now, 675 rubles →
Qayb ka mid ah pendant iyo hilqado ka yimid Diva, 475 rubles →
Dhegaha qoob-ka-cayaarka ee Bradex, 399 rubles →
10. Kareemada gacanta
Hadiyaddan waxtarka leh waxay ku iman doontaa waxtar leh maalin kasta: waxay qoyn doontaa maqaarka gacmahaaga, waxay kaa nadiifin doontaa raaxo la'aanta, waxayna kaa ilaalin doontaa qabow iyo dabaysha.
Kareemka gacanta oo leh shan dhadhan oo laga dooran karo AliExpress, 91 rubles →
Kareemka gacanta ee xoogga leh Intensiv + laga bilaabo Kamill, 109 rubles →
Farmstay collagen kareem gacanta, 290 rubles →
Kareemka gacanta oo laga soosaaray muuska Farmstay, 232 rubles →
Tani waa shay faa'iido leh, laakiin waxa fiican inaad hadiyad ahaan u siiso kalsoonida in saaxiibkaa uu runtii u baahan yahay boorso cusub. Waxaa laga yaabaa inuu ku habboon yahay kayd ahaan.
Boorsada oo leh qaybo biilasha, kaararka iyo qadaadiicda AliExpress, laga bilaabo 1 217 rubles →
Boorsada maqaarka ee kaararka leh siibadaha ee Asos Design, 990 rubles →
Jeebka maqaarka faux ee Mon Mua, 1,390 rubles →
Boorsada daabacaadda Mango, 1 299 rubles →
Shandad ka samaysan dhar iyo maqaar macmal ah oo laga keenay DeFacto, 499 rubles →
Mugaga ama koobabka waxaa badanaa la bixiyaa marka ay waayeen wax ka sii gaar ah danaha iyo baahida qofka. Laakiin koob si toos ah ugu qasi kara cabitaannada marka la taabto badhanka ayaa ka farxin doona qof kasta. Koobabka qurxoon oo kaliya ayaa hubaal ka farxin doona qof walba.
Mug otomaatig ah oo ka yimid AliExpress, laga bilaabo 593 rubles →
Mug Unicorn oo leh qaansoroobaad No. 1 oo dabool leh iyo qaaddo Eureka ah, 572 rubles →
Mug Cat No. 1 oo leh dabool iyo qaaddo Eureka, 650 rubles →
Mug u eg shabeelka Balvi, 1 190 rubles →
13. Muraayad jeebka
Hadiyad waxtar leh oo loogu talagalay kuwa daneynaya muuqaalkooda. Xitaa way ka fiican tahay haddii muraayaddu u muuqato mid aan caadi ahayn ama ay leedahay nalal LED ah oo ku dhex jira.
Muraayada jeebka ee iftiinka leh ee AliExpress, laga bilaabo 386 rubles →
Muraayada jeebka oo leh 2x weyneyn, RUB 319 →
Muraayada jeebka oo leh dhalaal ka yimid ilikegift, 345 rubles →
Muraayada jeebka oo leh iftiin iyo weynayn ka timid ABBA, 577 rubles →
14. Selfie laambad
Dadka jecel Selfie waxay ka faa'iidaysan karaan laambad dheeri ah, gaar ahaan haddii talefanka casriga ahi aanu lahayn fallaadh u jeedda hore. Wicitaanada fiidyaha ee meelaha aan si liidata u iftiimin, wax noocan oo kale ah ayaa sidoo kale ku habboon.
Garaac nalka loogu talagalay selfie oo leh tripod ka AliExpress, laga bilaabo 1 153 rubles →
Giraanta khafiifka ah ee miiska saaran ee casriga ah ee Raygood, 899 rubles →
Booska dharkaaga ayaa noqon doona wax yar oo wanaagsan oo ku kordhinaya jawiga xafladaha. Gaar ahaan haddii lagu sameeyo qaabka sanadka cusub ama qaabka miraha afka.
Brooch oo ah jeex liin ah oo ka yimid AliExpress, 220 rubles →
Brooch ee qaabka guumays ka Gilmeeva, 390 rubles →
Brooch ee qaabka ubaxa ee Sheekooyinka Fashion, 1 490 rubles →
Brooch oo qaab tufaax ah oo ka yimid Barafka & Ururinta Sare, 1,407 rubles →
Waxaad ku ridi kartaa dahabka iyo shay kasta oo yaryar shandad yar oo sanduuq ah.
Sanduuqa dahabka ah oo leh saddex heerar oo ka socda AliExpress, 1,448 rubles →
Sanduuqa dahabka ee Wess, 1,570 rubles →
Sanduuqa dahabka ee alwaax ee Master Rio, 1,368 rubles →
17. Shanlada gadhka
Nin gadh mug leh ayaa shanlo u baahan. Ku habboon birta aan fiicnayn iyo burushka stencil ee is-qaabaynta.
Stencil ee gar iyo shaarbo leh shanlo laga soo bilaabo Manecode, 439 rubles →
Shanlada gadhka alwaax SB-Basic line ka Schwerter GmbH, 690 rubles →
Shanley oo ah mindi balanbaalista oo ka samaysan bir ka timid Mfgame, 369 rubles →
18. Curyaaminta indhaha
Hadiyad loogu talagalay kuwa jecel indho-furka indhaha iyo muuqaalka muujinta. Qalab aan qaali ahayn laakiin faa'iido leh.
Curiyaha indhaha korantada ee AliExpress, 132 rubles →
Indha-shareeraha indhaha ee Zinger, 300 rubles →
19. Smartphone kiciya
Wax faa'iido u leh ciyaartoyda jecel noocyada mobilada ee PUBG ama Fortnite.
Kicinta casriga ah ee Aliexpress, laga bilaabo 235 rubles →
Haysta kiciyeyaasha GameSir ee leh AliExpress, laga bilaabo 1 621 rubles →
Xakamaynta ciyaarta ee taleefannada casriga ah ee AliExpress, 1 927 rubles →
20. Koofiyada Santa
Soo iibso dhowr koofi oo u dhiib si aad u farxad geliso asxaabtaada oo aad u ilaaliso jawi farxadeed.
Koofiyada Santa ee AliExpress, 293 rubles →
Koofida sanadka cusub oo leh daabacaadda qaabka barafka ee sixirka jiilaalka, 200 rubles →
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 20 hadiyadaha sanadka cusub ee boorsada kasta!